Football Khabar » डिबालाको भविष्य अन्योलमा !
डिबालाको भविष्य अन्योलमा !
यतिबेला सरुवा बजारमा यदि कुनै खेलाडीको बढी चर्चा छ भने उनी इटालियन युभेन्टसका अर्जेन्टिनी फरवार्ड पाउलो डिबाला हुन् । २५ वर्षीय स्टार खेलाडीलाई युभेन्टसले इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडका बेल्जियन फरवार्ड रोमेलु लुकाकुसँग साटफेर गर्ने तयारी गरेको चर्चा छ ।
तर, डिबाला भने ओल्ड ट्राफोर्ड जान इच्छुक देखिएका छैनन् । इटालियन मिडियाका अनुसार अर्जेन्टिनी फरवार्डले युनाइटेड जान इन्कार गरेका छन् । सट्टामा उनले म्यानचेस्टर सिटी वा लिरभपुल जाने इच्छा जनाएका छन् ।
‘टुटो स्पोर्टस्’का अनुसार युभेन्टस लुकाकु भित्र्याउन डिबाला दिन तयार छ । सो कुरामा युनाइटेड पनि सहमत देखिनछ । तर, डिबाला स्वयं भने आकर्षक सुविधामा मात्रै युनाइटेड जान चाहन्छन् । उनले युभेन्टसमा भन्दा निकै आकर्षक रकम युभेन्टसमा माग गरेको बताइन्छ ।
यता, युनाइटेडले डिबालाका एजेन्टलाई समेत आकर्षक पैसा तिर्नुपर्ने छ । तर, इंग्लिस क्लब सो पैसा खर्च गर्ने पक्षमा छैन । अहिले डिबालाको इंग्ल्यान्डको सरुवा खेलाडीले पाउने सुविधा र खेलाडीका एजेन्टले पाउने कमिसनमा अल्झिएको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति १८ श्रावण २०७६, शनिबार ११:५३
Ronaldo away3goals
ला लिगामा आज चार खेल हुँदै : रियल मड्रिड र लेभान्टे भिड्दै !